सुर्खेतमा बच्चा जन्मिदा काठमाडौँमा बाबु पत्ता लगाउन तछाडमछाड ! भाइरल हुन अपनाउँछन् यस्ता फण्डा (हेर्नुस् भिडियो) – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /Video/सुर्खेतमा बच्चा जन्मिदा काठमाडौँमा बाबु पत्ता लगाउन तछाडमछाड ! भाइरल हुन अपनाउँछन् यस्ता फण्डा (हेर्नुस् भिडियो)
सुर्खेतमा बच्चा जन्मिदा काठमाडौँमा बाबु पत्ता लगाउन तछाडमछाड ! भाइरल हुन अपनाउँछन् यस्ता फण्डा (हेर्नुस् भिडियो)
अहिले सामाजिक संजालमा सुर्खेत घ’टनाले सबैको ध्यान खिचीरहेको छ । सुर्खेतमा एउटी काकी र भतिजाको अ’नैतिक सम्बन्धबाट बच्चा जन्मेको भन्ने खबर सार्वजनिक भयो र घटना भाइरल भएसँगै विभिन्न खालका हेडलाईन् राखेर समाचार सम्प्रेसन भइरहेका छन् । सामाजिक संजालमा उक्त घटना भाइरल बनेपछि धेरैले आफ्ना विचार प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
केही विश्लेषक भनौदाहरुले त, आफुले सम्पूर्ण घटनाको बिस्तृत जानकारी नै भए जसरी आफ्ना अभिव्यक्ति दिईरहेका छन् । पछिल्लो समय केही युट्युब च्यानलहरुले भाइरलको ट्याग भिराइ दिएका पुण्य गौतमले त, मलाई सबै कुरा थाहा छ, सबैकुरा बुझेको छु समेत भन्न भ्याए । आफुलाई सामाजिक अभियन्ता भन्ने पुण्य गौतम र हरि उदासीले यसरि अन्तर्वार्ता दिए कि मानौं उनीहरु त्यहाँ पुगेर उक्त घटनाको सम्पूर्ण नालीबेली नै बुझेका छन् ।
आफ्नो चासोको बिषय होस् या नहोस् आफनो विचार राख्न उनीहरु अगाडी सरेका हुन्छन् । यो घ’टनालाई लिएर पनि पुण्य, हरि उदासीले आफ्नो भनाइ अघि सार्न एक इन्च पनि पछि परेनन् । यो बिषयको सम्बन्धमा प्रहरी तथा अदालतले छिनो फानो गर्नेछ तर आफैँ न्यायाधिस बनेर अनेक टिका टिप्पणी गर्ने यिनको यो हर्कत अलिक अपाच्य भएन कि ?
गौतमकै पदचाप पछ्याएर ‘भाइरल’ बन्नेहरुको सूचीमा ‘मुकुन्दे’ अर्थात् मुकुन्द घिमिरे , हरि उदासी, नरनाथ गौतम, मंगल थापा ‘मंगले’ लगायत छन् । केही वर्षअघिसम्म रत्नपार्कमा रुखमाथि चढेर भाषण गरी चर्चा कमाएका मुकुन्देलाई नचिन्ने जमात सायद कमै होला । धेरैले पागल ठान्ने मुकुन्दे भने आाफूलाई राजनीतिक विश्लेषक भएको दाबी गर्छन् । रत्नपार्कमा भाषण गर्दै हिँड्ने मुकुन्दे त्यसयता भने सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय छन् । आजकल उनी टिकटकमा पनि निकै छाएका छन् ।
अहिलेसम्म अविवाहित मुकुन्देले युवतीहरुसँग बनाएका धेरै टिकटक भिडियो सामाजिक संजालमा भाइरल नै छन् । सामाजिक संजालमा अरुका व्यक्तिगत बिषयलाई लिएर टिका टिप्पणी गर्ने यी भाइरल भनिएकाहरुको क्रियाकलाप अरुका लागि पनि समाचारका बिषय नबनेका हैनन् । केही युटुबरहरुले त उनीहरुका क्रियाकलापलाई पछ्याई पनि रहेका हुन्छन् ।
देशमा भएका घटनाको बारेमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन जहिले पनि लालायित देखिने यी पात्रहरु चर्चा बटुल्नकै लागि विभिन्न युटुब मिडियाहरुलाई आफैँ निम्तो दिएर बोलाउने गरेका समाचार प्रशस्त छन् । यी सबै कसको आलोचना गरेर आफू हिरो हुने भन्ने होडमा तछाड मछाड गर्दै लागिरहेका छन् ।
आफु अब्बल छु भन्ने मामलामा यहाँ कोहि भन्दा कोहि कम छैनन् । उनीहरु आफु चर्चामा आउन अनेक फण्डा अपनाउन पछि पर्दैनन् । एक अर्का प्रति आरोप प्रत्यारोप गरेरै भएपनि सबैको ध्यान आफूतिर केन्द्रित गर्नेतिर जोड तोडले लागि परेका हुन्छन् । यी सबैले आफुलाई सामाजिक अभियन्ता, म फलानो ढिम्कानो भनेर कसैले तपाई भनोस या नभनोस् आफैँ मपाई बन्न खोजेको देखिन्छ ।
पुर्व देखि पश्चिममा घटेका अनेक घटनालाई काठमाडौँमा बसेर उनीहरु यसरि विश्लेषण गर्छन् कि मानौं उनीहरु स्वयम् त्यहाँ पुगेर घटनालाई बिस्तृतमा बुझेका छन् । भाइरल हुनकै लागि कसैको व्यक्तिगत बिषयलाई लिएर बोल्नु कतिको जायज हो ? कोहि सहि को गलत भन्ने आम दर्शक श्रोताको हातमा छ ।
आफ्नो विचार ब्यक्त गर्न पाउने अधिकार र स्वतन्त्रता जो कोहीलाई पनि छ तर समाजका यस्ता पात्रहरुले उटपटयांग, चाहिँदो नचाहिंदो बोलेर सस्तो लोकप्रियता बटुल्ने मात्र ध्यय देखिएको छ । यसको अपवाद यी मध्ये कोहि पनि बन्न सकेनन् ।
युटुब पत्रकारितामा संलग्न धेरै युटुबरले प्रशंसनीय काम गरिरहेका छन् तर यस्ता खालका गतिबिधिले समाजमा नकारात्मक संदेश प्रवाह भइरहेको छ भने युटुब पत्रकारिता गर्नेलाई पनि समस्या खडा गरेको छ । हुन त यहाँ दुधले नुहाएका कोहि पनि छैनन् । तर भाग्य न्यौपाने, शिशिर भण्डारी, मोहन बस्नेत, हिमेश न्यौपाने लगायत युटुब पत्रकारका प्रशंसनीय कामलाई नकार्न सकिदैन ।
आफ्नो नाम जस्तै ‘तात्तातो खबर’का भाग्य न्यौपानेले धेरैको भाग्य चम्काईदिएका छन् । देश तथा विदेशबाट मनकारी मनहरुले गरेको सहयोगलाई उनी लगायत नयाँ नयाँ न्युज नेपालका शिशिर भण्डारी, टाइम्स खबर नेपालका हिमेश न्यौपाने र नेपाल अपडेटका मोहन बस्नेतले कुना काप्चामा पुगेर गरिब दुखिलाई राहत प्रदान गरेर धेरै दिन दुखिको उद्दार गरेका छन् ।
केही दिन अगाडी मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल अपडेटका मोहन बस्नेतलाई आफैँले फोन गरेर उनको कामलाई सराहनीय काम गरेको भन्दै प्रोत्साहन गर्नु भएको थियो । त्यसबाट पनि उदाहरनिय काम गर्दै आएका धेरै युटुब पत्रकारलाई थप उत्साह थपेको छ । साथै, बाटो बिराएका अन्य युटुबरहरुका लागि पनि सहि मार्ग तर्फ अग्रसर हुने बाटो देखाएको छ ।
केही युटुबरका कारण अहिले युटुब पत्रकारको सराहनीय काम र स्वयम् युटुब पत्रकार पनि बदनाम भइरहेका छन् । अहिलेका गतिबिधिबाट पनि नसच्चिने हो भने युटुब पत्रकारले गरेका काम पनि यसले र उसले यस्तो गरेको थियो भन्दै एकादेशको कथा बन्न समय लाग्दैन । अब पनि पाठ नसिके कहिले सिक्ने ?
कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढेपछि भर्खरै सरकारको यस्तो घोषणा, २७३ जनामा कोरोना पुष्टि…..(भिडियो सहित)
दिउँसो मान्छेको सेवा, राती कुकुरको । शिशिर भण्डारी राती राती टोलभरी डुल्दै बाटोका कुकुरहरुलाई खाना खुवाउँदै (भिडियो हेर्नुस)
संसारलाई छक्क पारेका कालिकोटका विजय शाहीको जादु हेर्नुस्, विश्व रेकर्ड बनाउँदाको अनुभव यसरी सुनाए (भिडियो हेर्नुस्)